Big City Small World (Series2Episode 8 - Happy New Year) - Myanmar Network
Posted by Forum Moderator2on January 25, 2013 at 15:58 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Series2Episode 8 – Happy New Year(အတွဲ-၂၊ အခန်း(၈)၊ ပျော်ရွှင်စရာနှစ်သစ်)
Series2Episode 8 - Happy New Year ( < အသံဖိုင် download ရယူရန် ဝဲဖက်မှ link ကိုနှိပ်ပါ)
(ဂျွန်နီနဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းများသည် နှစ်သစ်အကြိုနေ့မှာ ဘာလုပ်ကြမှာပါလိမ့်။ နောက်ဆုံးတော့ ကားလို့(ခ)ဟာ ဆာရာကို ဒိတ်လုပ်ဖို့ တောင်းဆိုပြီလား?)
ကဲ ဒါဆိုရင် ခရစ္စမတ်ကို အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ ကျော်ဖြတ်ပြီးတဲ့နောက် နှစ်သစ်အကြိုနေ့မှာဘာလုပ်ကြမလဲ။
Sarah: New Year already! Christmas has only just finished! နှစ်သစ်တောင်ရောက်ပြီ၊ ခရစ္စမတ်က ဖြင့် ပြီးကာစရှိသေးတယ်။
အမှန်အတိုင်းပြောရရင်တော့ ဆာရာရေ အခုအထိဟာ ခရစ္စမတ်ပါပဲ၊ ခရစ္စမတ်က ဇန်န၀ါရီလ (၆)ရက်နေ့အထိ လေနှစ်သစ်အကြိုနေ့က ခရစ္စမတ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါပဲ။
ငါ့အနေနဲ့ ပြန်ပြီးချက်ပြုတ်နှိုင်ပြီပေါ့ဗြိတိန်မှာ နှစ်ကူးအတွက် အထူးညစာရှိလား
တရုတ်ပြည်မှာ ဆိုရင်လမ်းတွေမှာ စီတန်းလှည့်လည်တာတွေအများကြီးပဲ၊ ဒီမှာရော စီတန်းလှည့်လည်တာတွေရှိလား?
ဟင့်အင်း - မရှိဘူး။
တရုတ်ပြည်မှာတော့ နှစ်ကူးက အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ အားလပ်ရက်ပဲ။ ဗြိတိန်မှာရော အလွန်အရေးကြီးလား။
ဒါဆိုရင် နှစ်ကူးမှာ လူတွေက ဘာလုပ်ကြလဲ။
အဲဒါကတော့ အခြေအနေအရပဲ။ တချို့ကတော့ ပါတီတွေလုပ်ကြတယ်။ တချို့ကျတော့ ဘီယာဆိုင် ဒါမှ မဟုတ် ကလပ်တစ်ခုခုကို သွားပြီး အရက်တွေသောက်ကြတယ်။
လူတချို့ကတော့ အပြင်ထွက်ပြီး မတ်တပ်ရပ်ကြတယ်၊ လူတော်တော်များများကတော့ လန်ဒန်မြို့လယ်ခေါင် မှာ ရှိတဲ့ တရယ်ဖလ်ဂါရင်ပြင်ကိုသွားကြတယ်။
ဒါ့အပြင် အများအားဖြင့် မိုးကလည်းရွာသေးတယ်။
ပြီးတော့ ဖရိုဖရဲနဲ့ ရှုပ်ရှက်ခတ်လွန်းတယ်
ကျွန်မကတော့ ဘီယာသောက်ရတာကို မုန်းတယ်
လူအများစုကတော့ အိမ်မှာပဲနေပြီး T.V ကြည့်ကြတယ်
Olivia: Then singasong at midnight.
ဒါဟာ တကယ်တော့ စကော့လူမျိုးတွေရဲ့ သီချင်းပါ။ (Auld Lang Syne သီချင်းကို နဲနဲပြဆိုသည်။
နားထောင်လို့ ကောင်းသားပဲ။ စာသားတွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က ဘာလဲ?
ကျွန်မကတော့ ဘီယာဆိုင်သွားပြီး မူးအောင် မသောက်ချင်ပါဘူး။
ငါတို့ ကလပ်တစ်ခုခုကို သွားလို့ရတာပဲ။ နေရာကောင်းတချို့ ငါ သိထားတယ်။ မိုးလင်းအထိ သွားကလို့ရတာပဲ။ တေးဂီတကောင်းကောင်းရယ်၊ မိန်းခလေးတွေ အများကြီးရယ်…။
ကာင်းပြီ၊ ကောင်းပြီ ဒါဆိုရင် ဒီအကြံကို မေ့လိုက်ကြရအောင်။
ဟင့်အင်း.. ငါ့အတွက်တော့ မဖြစ်ဘူး၊ ဗင်ဒျူမကြိုက်လောက်ဘူးလို့ထင်တယ်။
လုပ်မနေစမ်းပါနဲ့ ဟယ်ရီရာ မင်းဘ၀ကို ဗင်ဒျူကိုခြယ်လှယ်ခိုင်းလို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ။
ငါ့ဘ၀ကို သူ မခြယ်လှယ်ပါဘူး။ ငါ့ကိုက သူနဲ့နေရတာကြိုက်တာ။ ပြီးတော့ သူလုပ်ချင်တာတွေကို ငါ လုပ်နေရရင်ကို ပျော်တာ။
မင်းကိုတော့ ငါနားမလည်တော့ဘူး ကိုယ့်လူရေ။
ဟေ့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်ဘူး၊ ငါ့မှာ ရည်းစားတွေမှ အများကြီးပဲ
အော်ဟုတ်လား.. ဘယ်လိုဖြစ်လို့ ငါသူတို့ကို မတွေ့ဘူးသေးတာလဲ?
အင်း-အဲ-အမ်- ဘယ်လိုလဲဆိုတာ မင်းသိပါတယ်လေ။
အဲဒါ ဘာလဲဟ ငါ့ကော်ဖီဆိုင်နားမှာ လှည့်လည်မယ်။ လုံးဝပဲ။ ပြီးတော့ နှစ်သစ်အကြိုနေ့ဆို ငါစောစောပိတ်နေကျ။ ဒါကြောင့် မင်းတို့တတွေ တခြားလုပ်စရာတစ်ခုခုကို စဉ်းစားကြ။
ဒါဆို ငါတို့ အခုပဲ ဆုံးဖြတ်ကြရမယ်၊ နှစ်သစ်အကြိုနေ့မှာ ဘာလုပ်ကြမှာလဲ?
ငါကတော့ ဘင်ဒျူနဲ့ တွေ့မယ်။ ငါတို့အိမ်မှာပဲ နေဖြစ်ကြမယ်ထင်တယ်။
ကျွန်မလည်းပဲ အိမ်မှာပဲနေမယ်။ကျွန်မအမက သူ့အမျိုးသားနဲ့ ပါတီတစ်ခုကိုသွားမလို့၊ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်မက ကျွန်မတူလေးဂျိုးကို ထိန်းရမှာ။
အခု မင်းပြောတော့လဲ ဟုတ်နေတာပဲ
တောင်းပန်ပါတယ်၊ နားထောင် ရှင်ကျွန်မအိမ်လာခဲ့ပါလား
အေး ဒါဆိုလဲ ကောင်းပြီလေ။
ဆာရာရေ အဲ .. ငါနဲ့ချိန်းပြီး အပြင်သွားကြလား?
ကျွန်မ သူငယ်ချင်း မဂ္ဂဒါကို တစ်ယောက်တည်း ထားခဲ့လို့မရဘူး။
ဟေ့ နေကြပါဦး၊ ငါရောပဲ…လား?
ကောင်းပြီ၊ အားလုံး ကျွန်မအိမ်ကိုပဲ လာကြပါတော့။ ဒါပေမဲ့ ညသန်းခေါင်းအထိပဲနော်။ ပြီးရင်တော့ အားလုံးကိုယ့်အိမ်ကိုယ်ပြန်ကြတော့။
ဟေး ကောင်းလိုက်တဲ့အကြံ ပျော်ရွှင်စရာနှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ!!